Alshabaab oo soo bandhigtay Gaadiid iyo Hub ay ku qabsatay Dagaalkii Camaara (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Alshabaab oo soo bandhigtay Gaadiid iyo Hub ay ku qabsatay Dagaalkii Camaara (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Alshabaab oo soo bandhigtay Gaadiid iyo Hub ay ku qabsatay Dagaalkii Camaara (Sawirro)
Qeybta Warfaafinta Al-Shabaab ayaa soo bandhigay sawiradda Gaadiid iyo Hub ay ku qabsadeen dagaalkii ay shala ku qaadeen saldhiga ciidanka Dowladda Fedreaalka iyo kuwa Galmduug ee deegaanka Cammaara ee gobolka Mudug.
Alshabaab ayaa sheegatay inay Dagaalka ku dishay askar ka badan 15, kuna qabsatay 18 gaari oo isugu jira Gaadiidak dagaalka iyo kuwa Xamuulka, waxaana ka mida sida ay sheegeen Gaadiid casri ah oo ay wateen ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Galmudug Axmad Kaariye Qoorqoor.
Sawirrada ilaa hadda lasoo bandhigay waxaa ka muuqda ilaa 8 gaari oo Gaari xamuul ah ku jiro iyo Saanad hub ah, Waxaana dhinaca Galmudug uu beenisay in shalay laga qabsaday Camaara ama lagala wareegay wax Gaadiid iyo hub ah.
Gaadiid la qabsaday
Previous articleMaxaad ka taqaan Amiirka Qarsoon ee Xarakada Daalibaan ‘Hebatullah Akhundzada’..? (Akhriso)
Next articleBeesha Caalamka War kasoo saaray Habraaca Doorashada iyo Dalab ay u dirtay Guddiga Amniga Doorashada